I-Sitio emangalisayo ejongene neSerra da Piedade - I-Airbnb
I-Sitio emangalisayo ejongene neSerra da Piedade
Indlu enendawo yokuphola yonke sinombuki zindwendwe onguEnderson
Ikwiikhilomitha eziyi-17 ukusuka e-BH, nge-030, (iivenkile ezinkulu, iivenkile zeziyobisi, njl.), ikude neendlela eziphezulu eziyi-3 km. Ukubona iSerra da Piedade. Indawo ye-4.700 m2, zonke iindonga, isango le-elektroniki, imigangatho eyi-2, i-300 m2, ikhitshi le-gourmet, ii-suites ezi-2 kunye ne-king bed kunye ne-whirlpool. Amagumbi okuhlambela okuhlala ayi-2 aneebhedi ezimbini ezibini. Igumbi elikhulu lokuhlala elidityanisiweyo. Indawo yokuqubha, ipuli enendawo yokubraya, isitovu seenkuni, isitovu sezoshishino, ifriji nefriji. Umbutho webhola ekhatywayo onemoto ehamba ngesikhephe nokukhanyisa
Ibala lebhola ekhatywayo elikhanyisiweyo, Ipuli Yokuqubha Enendawo Yokuqubha, Indawo Yokubraya, Isitovu Seenkuni kunye Nezoshishino.
Igadi ehlanganisiweyo kunye negadi kunye nendalo eninzi kuyo yonke. Yonke indawo enodonga nenemfihlo, imbonakalo esisigxina yeSerra da Piedade. Inkangeleko emangalisayo, ukuthi zava. Ukufudumeza amanzi asembindini ngokuzenzekelayo, indawo yokuxhoma umzimba, kunye nokukhuselwa kwefenitshala yabantwana.
4.91 · Izimvo eziyi-48
Iindawo ezikufutshane, iCampo do Pires, zikufutshane neendlela eziphakamileyo eziyi-30. Landela indlela eya kumzantsi weJardins de Petropolis Condominium. Le ndawo intle kakhulu. Konke ukungena emnyango kuhanjwa ngeenyawo, i-asphalt kunye ne-pavement evalekileyo. Indawo ekhuselekileyo nelula ukufikelela kuyo, kufutshane kakhulu neevenkile ezinkulu, iivenkile zezinto ezibhakiweyo, iivenkile.
Umbuki zindwendwe ngu- Enderson
Nayiphi na imibuzo, iingxaki, iindwendwe zinokufowunela, sifuna ukuba uhlale apha uxolo nokuphumla. Kule ndlu kukho umntu ohoyayo ibe yena nomfazi wakhe banokunikela ngenkxaso ukuba kuyimfuneko.